Otu esi etinye Microsoft Edge na Fedora 34/35 - LinuxCapable
Otu esi etinye Microsoft Edge na Fedora 34/35
October 7, 2021 by Jọshụa James
Bubata Microsoft Edge Repository
Wụnye Microsoft Edge
Otu esi ebido Microsoft Edge
Otu esi emelite Microsoft Edge
Otu esi ewepu (wepu) Microsoft Edge
Fedora ndị ọrụ ugbu a, na ndabara, bụ naanị na ndị Ihe nchọgharị ịntanetị Firefox. Agbanyeghị, enwere ike itinye ọtụtụ ụzọ ọzọ. Microsoft Edge bụ otu ụzọ ọzọ nke na-emepe emepe kemgbe ihe karịrị otu afọ ma na-enweta ọtụtụ nyocha dị mma n'etiti ọtụtụ obodo nkesa Linux yana ikekwe ọzọ ma e jiri ya tụnyere naanị ịgbanwe gaa na. Google Chrome.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Microsoft Edge na Fedora.
OS akwadoro: Linux Fedora 34 (Ụdị ọhụrụ ga-arụkwa ọrụ)
Mbụ, gbaa iwu a ka ibubata igodo GPG maka Mbubata RPM:
Enwere ike itinye Microsoft Edge ugbu a site na iji iwu dabara dị ka n'okpuru:
ụdị "Y", pịa pịa "Tinye igodo" aga n'ihu.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na nke gị Fedora desktọpụ iji mepee ụzọ: Ihe > Gosi ngwa > Microsoft Edge (dev). Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu ngwa.
E mechaa, ị ga-ahụ nhọrọ atọ Mkpali, Ozi or Chebara ya echiche. Ịhọrọ taabụ ọ bụla ga-elele ihe nlele ga-adị na ndabere ihe nchọgharị Edge gị. Họrọ otu wee pịa ya bọtịnụ nkwenye.
Rịba ama, nkuzi ahụ jiri Fedora 35 Beta Wụnye Microsoft Edge na ihe niile rụrụ ọrụ nke ọma dịka ọ mere na Fedora 34.
Ka imelite ihe nchọgharị Internetntanetị Microsoft Edge, mee ya Iwu melite DNF na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Ma ọ bụ kwalite naanị Microsoft Edge n'onwe ya:
Iji wepu Edge na Linux Mint, mebie iwu njedebe ndị a:
ụdị "Y", wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na mwepụ Microsoft Edge.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Microsoft Edge Nchọgharị Mail igodo
Otu esi etinye Linux Kernel 5.14 na Linux Mint 20
Otu esi etinye Google Chrome Stable, Beta, ma ọ bụ na-adịghị akwụ ụgwọ na Fedora 34/35